Da Vinci: Curiosities momba ny iray amin'ireo saina mamorona indrindra | Famoronana an-tserasera
Da Vinci: Curiosities momba ny iray amin'ireo saina mamorona indrindra amin'ny tantara
«Mona Lisa» avy amin'i thinkrorbot dia nahazo alalana tamin'ny CC PDM 1.0
Mpanoratra, mpamorona, mpanoratra, mpanao mari-trano, matematika, anatomista, injeniera miaramila ary lava sns, manome hevitra momba ny lafiny maro amin'ny talenta Leonardo da Vinci (1452 - 1519), iray amin'ireo famoronana lehibe indrindra teo amin'ny tantara.
Teraka tao Vinci, Florence, izy dia lehilahy tsy manam-piadan-tsaina sy fahalianana tsy manam-petra, fifangaroana eo amin'ny mpanakanto sy ny mpahay siansa izay mbola manaitra antsika ankehitriny.
Ho an'ny zavatra noforoniny lehibe Izy no heverina ho mpanakanto lehibe voalohany an'ny Italian Cinquecento. Hiverina any amin'ny roapolo taona voalohany amin'ny taonjato faha-XNUMX isika, amin'ny tampon'ny Renaissance, miaraka amin'ny fanapahan'ny Medici any Florence.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hahita curiosities vitsivitsy momba ny fiainany manokana ianao.
1 Tsy nandeha nianatra
2 Nianatra nandoko tao amin'ny atrikasa Verrocchio izy
3 Nandany fotoana tao amin'ny tranomaizina izy
4 Mamorona sfumato
5 Faty maro no voaroaka miafina
6 Nanoratra tsy misy fitsaharana izy ary amin'ny fomba vinavina
7 Voalaza fa disleksika izy
8 Namolavola milina marobe izy, mpialoha làlana ny famoronana vaovao ankehitriny
9 Asa maro mbola tsy vita
10 Ilay lehilahy vitruvianina
11 Ny Mona Lisa na Gioconda, sary hosodoko malaza indrindra sy manahirana azy
Tsy nandeha nianatra
Na eo aza ny maha-notaire malaza sy mpanankarena ny rainy tamin'izany fotoana izany dia tsy nianatra i Leonardo, na dia nianatra kilasy fototra tao an-trano aza izy. Mety hitranga izany satria zaza tsy ara-dalàna izy, nalaina ivelan'ny fanambadiana, izay reniny inoana fa vehivavy tantsaha. Na dia tsy tany am-pianarana aza dia tsy lany lany ny fahalianany amina taranja isan-karazany.
Nianatra nandoko tao amin'ny atrikasa Verrocchio izy
Nanomboka ny fampiofanana nataony tamin'ny naha-zatovo azy ho any amin'ny atrikasan'ilay mpanao hosodoko malaza Andrea del Verrocchio any Florence, toerana nahalalany ny talenta kanto nananany.
Nandany fotoana tao amin'ny tranomaizina izy
Nampangaina ho nanao sodomia niaraka tamin'ny ankizilahy hafa avy tany Florence izy, zavatra tsy voaporofo tamin'izany fotoana izany fa hamela azy ho mariky ny fiainana, matahotra ny fanenjehana sy ny fiampangana azy.
Na eo aza ny sangan'asa hosodoko 20 eo ho eo fotsiny, i Da Vinci dia manolotra rafitra fomba fijery vaovao ao aminy, manary ny fomba fijery mivantana noho ny fanodinkodinana ny fahitana voajanahary ny zavatra, satria ny natiora dia miova sy mandalo, ka manome ny fomba fijery an'habakabaka. Amin'ity fomba fijery ity, ny fahasamihafan'ny fahitana dia raisina, mamorona drafitra manjavozavo mampiseho ny fitetezana fiainana, ny teknikan'ny Da Vinci sfumato fanta-daza.
Faty maro no voaroaka miafina
Da Vinci dia anatomista be mpandika teny, nanatanteraka fikolokoloana olona sy biby marobe (zavatra voarara amin'ny fomba fijerin'ny katolika manjaka), ka namorona mihoatra ny Sary ara-tsiansa 240 amin'ny antsipiriany lehibe.
Nanoratra tsy misy fitsaharana izy ary amin'ny fomba vinavina
«Leonardo Notebook» nataon'i twid dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-SA 2.0
Da Vinci dia nameno ny pejy sy pejy an'ireo kahie fanta-daza tamin'ny zavatra hitany sy nianarany rehetra, kaonty kely indrindra. Amin'ny alàlan'ny teniny dia ahafahantsika mianatra momba ny lafin-javatra marobe nokasihiny, nanomboka tamin'ny sary hosodoko ka hatramin'ny maritrano, tamin'ny alàlan'ny botaniana ary lohahevitra marobe. Ho fanampin'izay, nanoratra tamin'ny fomba tsy ara-potoana izy, izany hoe avy amin'ny ankavanana kavia, ka niaro ny teniny tamin'ireo snoopers mety hitranga.
Voalaza fa disleksika izy
Avy amin'ny famakafakana ny asa sorany dia tsoahina fa voan'ny dislexia i Leonardo.
Namolavola milina marobe izy, mpialoha làlana ny famoronana vaovao ankehitriny
«Museum of Science 2017» nataon'i AnubisAbyss dia nahazo alalana tamin'ny CC BY-NC-SA 2.0
Injeniera ady izy, namolavola basy, tafondro, tanky ... ary tsy izany ihany. Namorona prototypes an'ny fiara mandeha irery ihany koa izy, ny milina misy ny fikasana hisidina ... ary ny famoronana maro be.
Asa maro mbola tsy vita
Leonardo nanao sary maromaro izay tsy nahavita ary namela asa maro mbola tsy vita koa izy. Toy izany ny fahalianany tsy hita lany ka nanangana tetikasa vaovao tsy tapaka izy. Imbetsaka izy, satria tonga lafatra, dia tsy tiany ny zavatra noforoniny ary navelany ho vita antsasany. Azy ny andianteny "Ny zavakanto tsy mba mifarana fa tsy rehefa vita".
Ilay lehilahy vitruvianina
«48/365 Homme de Vitruve» avy amin'i unsingequiparle dia nahazo alalana tamin'ny CC PDM 1.0
Raha ny fanazavan'ilay mpanao mari-trano Vitruvius dia fanahafana ny natiora ny mari-trano. Nandinika ny refin'ny olombelona sy ny olan'ny matematika amin'ny famolavolana ny faribolana mifandray amin'ny vatana izy. Leonardo, mpanaraka mahatoky ny mpanao maritrano, nanao ny sary malaza an'ny lehilahy Vitruvian, miaraka amin'ny fifehezana lehibe.
Ny Mona Lisa na Gioconda, sary hosodoko malaza indrindra sy manahirana azy
Hita ao aminy ny fahaizan'i Leonardo maneho hevitra ary koa ny fampiharana ny teknikan'ny sfumato. Ny tsikiny feno hafanam-po, ary koa ireo tantara maro manodidina ny sary hosodoko, dia nahatonga an'io asa io ho iray amin'ny malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Ary ianao, inona no andrasanao hampivelatra ny fahaliananao amin'ny famoronana toa an'i Leonardo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Da Vinci: Curiosities momba ny iray amin'ireo saina mamorona indrindra amin'ny tantara